January 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Stages of LSCS
ဗိုက်ခွဲမွေးခြင်း အဆင့်ဆင့် ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာ ရှိလာနိုင်ပြီး ဒီလိုမျိုး ကြိုတင်ပြီး ခွဲမွေးဖို့ပြင်ဆင်တာကို ( planned LSCS ) လိူ့ခေါ်ပါတယ် ။ အဓိက ခွဲမွေးကို မွေးရမယ့်အကြောင်းရင်းတွေထဲ တင်ပဆုံဖြင့် ကလေးအနေအထားဖြစ်နေခြင်း ၊ အရင်…
ကလေးရဖို့ အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းသစ်များ တစ်ခါတစ်ခါ ကလေးဆိုသည်မယ် မလိုချင်သူများတွင် ဟောတစ်ယောက်…. ဟာတစ်ယောက် ရတတ်သော်လည်း၊ တကယ်လိုချင်သူများထံတွင် မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာဖြစ်တတ်၏။ သားသမီးမရသေးသူများအဖို့ ကံကောင်းသည့် တစ်ချက်ကတော့ ယခုလိုခေတ်မှီတိုးတက်နေသော ခေတ်တွင် လူဖြစ်လာရခြင်းဟုပင် ဆိုရပေမည်။ အရင့်အရင်ခေတ်များမှာ ကလေးမရလျှင် ထိုင်စောင့်ရုံ လည်ပင်းရှည်အောင်မျှော်ရုံမှတစ်ပါး…
အဝလွန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်မှု အဝလွန်ခြင်းလို့ဆိုလိုက်သည်နှင့် သင့်အနေနဲ့ ဝခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော အန္တရာယ်များကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ နှလုံးရောဂါ ၊ သွေးတိုးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ အဆစ်အမြစ်ပြသနာအစရှိတာတွေကို သင်သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အလွန်အမင်းဝခြင်းဟာ…
Types of Baby Cradle
ရွေးချယ်စရာ ကလေးပုခက်များ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ပုခက်ဆိုသည်မှာ မမွေးမီကတည်းက မိဘတိုင်း ရှိသင့်သော အဖိုးတန်လှသည့် အရာပင်ဖြစ်သည် ။ သည်နေရာလေးဟာ ကုလေးတွေအတွက် သူတို့ဘဝရဲ့အချိန်အများစုကုန်ဆုံးရာနေရာလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီလို အရေးကြီးလှတဲ့ကလေးပုခက်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ ။ ဒီအောက်မှာ အားနည်းချက်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း စိတ်အပြောင်းအလဲများ အမျိုးသမီးအများစုအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း စိတ်အပြောင်းအလဲဟာ မြန်ဆန်လေ့ရှိပါတယ် ။ဒီလိုစိတ်ခံစားမှု တစ်ခုကနေ တစ်ခု အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေခြင်းဟာ စိတ်ပိုတိုစေ စိတ်ပိုပင်ပန်းစေရုံသာမက ဘာလို့ဖြစ်ရလဲ ဘာလို့ဒီလိုခံစားရလဲဆိုတာတွေဟာ အဖြေရှာရ ခက်ခဲတတ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ? ပထမဆုံး သင့်ကိုယ်သင် ပြောရမှာက ဒါဟာ…
What if you wannna get pregnant after sterilization
သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ကလေးပြန်လိုချင်လျှင် “ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင် “ ဆိုတဲ့ စကားပုံက အလကားမဟုတ် ….. လူနာတွေဆိုသည်မှာလည်း လွယ်တဲ့အမျိုးတော့ မဟုတ်….. သားကြောဖြတ်ချင်လွန်းလှပါချည့်ရဲ့ ဆိုတာလည်း သူတို့….. သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီသေးလို့ သားကြောမဖြတ်ပေးလို့ စိတ်ဆိုးတာလည်း သူတို့….. အဲ……..
သားမဲ့သန္ဓေ သားမဲ့သန္ဓေဆိုတာ မျိုးအောင်ပြီး မမျိုးဥဟာ သားအိမ်နရံကိုတွယ်ကပ်ပေမယ့် သန္ဓေသားအဖြစ် ဖွံဖြိုးမှုမရှိလာခြင်းကိုခေါ်ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်း သားပျက်သားလျှောခြင်းဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အဓိကအဖြစ်များဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံ စောလွန်းတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းတောင် မသိလိုက်သည်အထိ ဖြစ်ပွားပါတယ် ။ ဒီသားမဲ့သန္ဓေဖြစ်စဉ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမ သုံးလပတ်အတွင်း…
ကလေးချီရာတွင် သတိပြုစရာ မိဘအသစ်ကျပ်ချွတ်အများစုမှာ အိပ်ရေးပျက်ရသည့် ညများ ၊ တညလုံးငိုနေမည့် ကလေးငယ်များ ၊ ခဏခဏလဲရမည့်သေးခံများ အစရှိသည်တို့ကို မျှော်လင့်ထားကြသော်လည်း အချိန်ပြည့် ကလေးပေါက်စနတစ်ယောက်ကို အချီအချလုပ်ရ ထိန်းရခြင်းအစရှိသည့် ကိစ္စတို့ကို အများစု လျှော့တွက်တတ်ကြပါတယ် ။ ကလေးငယ်များကို ထိန်းကျောင်းပြုစုရခြင်းဟာ…
ကလေးငယ်များတွင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း သင့်ရင်သွေးလေး ဆံပင်တွေ ကျွတ်တယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေပါသလား ။ မပူပါနဲ့ ဒါဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ အသက် ခြောက်လ အတောအတွင်း ကလေးငယ်များမှာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ် ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပါ ။…
ကြေကွဲနာကျ သင့်နှလုံးသား စာစုခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်ပြီး အသည်းကွဲတဲ့အကြောင်းတွေများလားလို့ သင်ထင်မြင်မိကောင်း ထင်မြင်နိုင်ပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါဟာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပါ ။ Broken Heart Syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ဒီရောဂါဟာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ယာယီနှလုံးမှာ ထိခိုက်ရတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါပဲ ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်သေဆုံးတာမျိုး အခြေအနေမျိုးတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။…